Siyaasiyiin mucaarad ku ahaa maamulka Jubbaland oo lagu qaabilay madaxtooyada Kismaayo – hareerley News
Hogaamiyaha iadoortey doortay ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa xalayto ku qaabilsay qasriga madaxtooyada ee magaalada Kismaayo siyaasiyiin ay kala aragti duwanaayeen.
Cabduqaadir Cabdiraxmaan Khaliif iyo Shiik Maxamed Ibraahim Shakuul ayaa ka mid ahaa shaqsiyaad dhaliili jiray Axmad Madoobe iyo hanaanka uu u doonayo in ay doorashada u dhacdo waqtigii Ololaha.
Balse siyaasiyiintan ayaa sheegay in wax waliba ay uga tanaasuleen midnimada iyo wadajirka shacabka Jubbaland.
Hogaamiye Axmed Madoobe ayaa dhanka kale fikrado wax ku oola ah ka qaatay xubnahaan waxaana uu sheegay in uu dhaqan galin Doono.
Kulankaan ayaa ku soo aadaya iyadoo Magaalada Kismaayo ay maalmo ka hor laba Hogaamiye oo kale lagu doortey halkaasi.
Maalmihii la soo dhaafay waxa jirtay muran ka dhashay in Xildhibaano ka tirsan Soomaaliland ay ka qeyb-galayaan Xaflada Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam,waxaana taasi ay keentay in Soomaaliland ay go’aano kazoo saarto ka qeyb-galka Xafladaha iyo shirarka u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed. Garyaqaanka guud ee Soomaaliland Cabdi Samad Cumar Maal ayaa sheegay in Sharciga u […]
Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magalada Muqdisho waxaa haatan ka socota Xaflad lagu daah furayo duulimaad toos ah oo diyaaradda Uganda Airlines ay ka bilaabeyso Magaalada Muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dalka. Munaasabadda ayaa waxaa ku sugan Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka,mas’uuliyiinta Shirkadda Uganda Airlines,qaar ka mid ah safiirada dalalka Caalamka u fadhiya Soomaaliya […]
Axmed Maxamed Islaam Oo isagu Yeerey Musharixiintii la Tartamey Ee Jubaland :-(Sawiro)